Ungayithuthukisa Kanjani Imali Yokuchofoza Nge-imeyili
NgoLwesine, July 14, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015
UDkt Todd's, indawo ye-e-commerce yemikhiqizo yokunakekelwa kwezinyawo esezingeni eliphakeme, iphendukele ku Encane ngephakheji yokuthengisa yewebhu yangokwezifiso. Ingxenye eyodwa esemqoka yomxube wokukhangisa kaDkt Todd ukumaketha nge-imeyili. Sakhe isu elisha lokuqukethwe, idizayini entsha futhi sabeka imephu ikhalenda lokuhlela. Sihlaziye enye yama-imeyili ephromoshini kaDkt Todd ukukhombisa ukuthi yini eyenza abantu bachofoze futhi baguqule.
Kungenzeka ukuthi uke wezwa igama elithi "ukuguqulwa kwamakhuphoni" njengendlela yokuchaza into yeGroupon. Sonke siyazi ukuthi abantu bayathanda ukuthola amadili, kepha insiza esemthethweni efana neGroupon idinga izindlela zokuhlukanisa cishe nengxenye yentengo yakho esehliswe kakhulu. Sibhale ngokuthatha izinto ezandleni zakho ukwenza iphromoshini efana neGroupon. Nasi isibonelo salokhu sisebenza. Ukwehliswa kakhulu kunokujwayelekile futhi ukukhawulela kuwo amahora angaphezu kwama-24 kusize ukuqalisa ama-oda.
Ingabe uyi-headlne noma uchofoza isithombe? Abantu abahlukahlukene bathambekele ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokuqukethwe. Ungahlala uvivinya ukubona ukuthi yiluphi uhlobo lwesixhumanisi oludonsa ukutholakala okuhle kakhulu kuzithameli zakho, kepha iqhinga elihle kakhulu ukuhlinzeka ngezinketho zesixhumanisi esifanayo. Isihloko, isithombe, incazelo yomkhiqizo nenkinobho yeSitolo Manje konke kuxhumene nomkhiqizo.
Ulimi olufaka phakathi isiqinisekiso somkhiqizo noma inqubomgomo elula yokubuyisa lubeka ithoni ekuthengeni okungakhathazi. Umbala nawo ungadlala indima enkulu. I-Orange, ngokwesibonelo, idala ukubizelwa esenzweni.
Uma ikhasimende libandakanyeke ngokwanele ukuvula i-imeyili yakho, bangahle bakuthande nakuFacebook. Ukunikeza izixhumanisi kubhulogi yakho noma amaphrofayli omphakathi kumema amakhasimende ukuthi ahlanganyele ngaphezu kokuthenga.
Esikhathini esedlule, sihlolisise izikhathi zokuthumela, imigqa yezihloko nokuningi. Njengoba sihlola le ndlela entsha yesaphulelo, siphinde sazama ukuhlukaniswa kohlu lwama-wth. Sithathe uhlu lwamakhasimende anomlando we-oda wezokwelapha nge-callus nalo lonke uhlu lwe-imeyili lukaDkt Todd. Ngokuhamba kwesikhathi, ungonga imali ngokuthumela okuqukethwe okulungile koxhumana nabo abalungile.
Amakhasimende anomlando woku-oda wemikhiqizo efanayo abe ne- Ukuphakama okungu-11% ngesilinganiso esivulekile. Amanani wokuchofoza kuwo acindezela kakhulu - uhlu olujwayelekile luthole i- 16% isilinganiso sokuchofoza, ngenkathi uhlu oluhlukanisiwe luthole ukutholwa U-72% uqhafaza ngesilinganiso.
Futhi ukuthengisa? Sihlaziye idatha yezinyanga eziyi-6 futhi sanquma ukuthi ngoLwesithathu kube usuku lokuthengisa oluphume phambili. NgoLwesithathu wokwethulwa kwale imeyili, ukuthengisa kukhuphuke ngama-91% ngaphezu kwesilinganiso sangoLwesithathu.
Lelisu liyingxenye eyodwa yohlelo lokumaketha lwe-imeyili jikelele. Njengoba sithuthukise uDkt Todd's kusuka kuthempulethi ejwayelekile ye-imeyili kuya kuhlelo lwe-imeyili olwenziwe ngokwezifiso, ithrafikhi yewebhusayithi eqhutshwa nge-imeyili inyukile ngama-256%.
Umthamo we ukuguqulwa kwalowo mgwaqo uye ekuthengisweni kukhuphuke ngendlela emangalisayo i-388%.
Bona i-imeyili online lapha.
Tags: isilinganiso sokuchofozaisilinganiso sokuchofozactrimeyili Marketingizibalo ze-imeyili
Jul 19, 2011 ngo-6: 17 PM
imiphumela emangalisayo… yiziphi ezinye izindlela ongalinganisa ngazo amanani akho wokuguqulwa ngokuya ngamanani wokuchofoza nokuningi…